Somaliska - KPA Pension
Warbixin guud ee hawlgabka oo ku qoran af-Soomaali
Ku soo dhowow adeegga macmiisha oo afaf badan ku hadla. Waxaan dooneynnaa inaan fursad kuu siinno sidii aad wax uga ogaan lahayd adeegga iyo hawlaha laga helo shirkadaha KPA Pension iyo Folksam, taas oo nolol-maalmeedka macaamiisha ka dhigeysa mid ammaan ah. Muhiim ayeyna noo tahay in aad ku caawinno.
Soo wac 0771-585911 si aan kaaga caawinno su’aalaha caamka ah oo ku saabsan hawlgabka.
Wixii su’aalo ah oo ku saabsan lacagta hawlgabka oo aad ku qaadato shaqooyinkii aad soo qabatay, waxaa wanaagsan inaad kala xiriirto xafiiska macmiisha ee shirkadda KPA Pension oo lambarka telefoonku yahay 0771-650 500. Waxaa lagu jawaabayaa afafka iswiidhishka iyo ingiriiska.